I-Swirl: Ivenkile yeVenkile yeVenkile yeVenkile | Martech Zone
singqonga I-Platform yokuThengisa eSelfowuni ™ liqonga lokuqala lokuvumela abathengisi abakhulu ukuba benze kwaye bahambise umxholo owenzelwe wena kunye nokunikezela kubathengi ngokusekwe kwiindawo zabo ezikwiivenkile ezithengisa izinto ezibonakalayo. Iqonga leSwirl libonelela ngesisombululo sokuphela kwesiphelo kubathengisi ukulawula imikhankaso esebenzayo enxibelelana nabathengi babo ngezixhobo zabo eziphathwayo naphi na ukusuka kwinqanaba lobumelwane, yonke indlela iye kwindawo ethile yevenkile.
Ngo-Meyi, uSwirl wasungula inkqubo yokulinga kunye nabathengisi befashoni bakazwelonke kubandakanya uAlex noAni, uKenneth Cole, kunye neTimberland ebonakalise ukuzibandakanya kwabathengi okuphezulu kunye nokuguqula ukuthengisa, ngendlela engazange ibonwe. Iipesenti ezingama-75 ezivenkileni zivuliwe.
Sibone iziphumo ezithembisayo ezivela kubaqhubi beenqwelomoya zeSwirl esibaleke ezivenkileni zethu ehlotyeni. Abathengi bayakuxabisa ukufumana izibonelelo ezenzelwe wena ezivenkileni; ngokucacileyo le yindlela elungileyo yokuba sinxibelelane nabathengi banamhlanje bedijithali. Ngokusekwe kwinto esele siyibonile ukuza kuthi ga ngoku, sinethemba lokwandisa ukusetyenziswa kwetekhnoloji yokuthengisa e-Swirl kwivenkile kwezinye iindawo zaseTimberland ngo-2014. URyan Shadrin, usekela mongameli weentengiso kunye ne-e-commerce yeTimberland.
I-Swirl In-Store Ivenkile yeNtengiso yeQonga idibanisa ukujolisa kwindawo encinci kuyo nayiphi na iapps yomthengisi ukuhambisa imiyalezo efanelekileyo, umxholo kunye nokunikezelwa kubathengi- ngelixa bethenga. Ixhaswe yiBluetooth® ye-Low Energy beacon beacons, i-Swirl inokukhomba indawo echanekileyo shopper ngaphakathi evenkileni, enje ngeleyi yomntwana okanye kwisebe le-elektroniki, ngexesha lokwenyani kwaye ihambise imiyalezo efanelekileyo, umxholo kunye nokunikezela ukuqhuba ukuthengisa.
Iqonga leSwirl libandakanya
Swirl SecureCast ™ Iibhikhoni -Iziqulatho ezizimeleyo, ibhetri eneBluetooth® ye-Energy ephantsi yokubeka ngaphakathi iibhakoni ezifaka kwimizuzu, zisebenza kuzo zombini ii-Apple kunye nee-smartphones ze-Android, kwaye ziqinisekise ngokuzenzekelayo indawo echanekileyo yomthengi othe wangena kwi-app yomthengisi. Izixhobo zeSecureCast zinokuqwalaselwa nokuba ziyahambelana ngokupheleleyo, zivulekile I-Apple iBeacons okanye, kubathengisi abachaphazelekayo ngedatha kunye nemfihlo yabathengi, banokukhuselwa ngokusebenzisa ubuchwephesha be-Swirl kunye nobuchwepheshe bezokhuseleko.
I-Swirl Mobile yeKlayenti yoPhuhliso lweSoftware (SDK) -Nika amandla abathengisi ukuba babethelele ngokulula itekhnoloji ye-Swirl kwii -apps zabo ezinophawu lokuthengisa, kubandakanya ukubanakho ukubandakanya abathengi ngomxholo ojolise kakhulu kwaye owenzelwe wena ngokusekwe kwindawo encinci yangaphakathi njengoko kumiselwe ziibhikhoni zeSecureCast. Amava afanayo asesitolo anokugcinwa nakweyiphi na inkqubo yomshicileli wesithathu yokwandisa ukufikelela kwabaphulaphuli kunye nokuqhuba ukugcwala kweenyawo kwiivenkile ezithengisa.
I-Swirl Marketing Console Iseti epheleleyo yezixhobo zokuthengisa ezenzelwe wena zolawulo lwephulo lokugcina ngaphakathi kunye ne kubahlalutyi, Ukuvumela abathengisi ukuba benze ngokulula ukuntywila kumava entengiso ezazisa ngokuzenzekelayo njengoko abathengi bethenga ezivenkileni. Amaqela entengiso anokuqhuba ngokufanelekileyo amaphulo kumawakawaka eevenkile kunye nezinto ezakhelweyo ezikhuselekileyo ezikhuselekileyo kunye nolawulo lokuhamba komsebenzi. Ikhonsoli esekwe kwilifu ikwabandakanya ukuphuculwa kolawulo lweebhakoni ezivumela umthengisi ukuba aphathe uthungelwano lwamawaka ezixhobo zeSecureCast kunye neApple iBeacon kusetyenziswa ujongano olunye.
singqonga Iinethiwekhi, Inc yinkampani yetekhnoloji enceda abathengisi ukuba basebenzise amandla eselfowuni ukutsala nokuchaphazela abathengi ngelixa bethenga ezivenkileni. Abathengisi abaphezulu abanjengoTimberland, uKenneth Cole, kunye no-Alex kunye no-Ani basebenzisa iqonga lokuthengisa likaSwirl kunye netekhnoloji yokulinda amalungelo awodwa omenzi wechiza ukwandisa ukugcwala kwevenkile, ukubandakanyeka kwabathengi kunye nokuguqula ukuthengisa.
tags: beaconsIvenkileIvenkile yentengisoindawo yentengiso esekwe kwindawoIvenkileukuthengisajikelezisa
Bunndle: Inethiwekhi yokuSasazwa kwesicelo esiSelfowuni